USTEVE EARLE: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YETRANSCENDENTAL BLUES - IINDABA
Ndingaqala olu hlaziyo ngokucela omnye okanye ababini abagqithisileyo kwi-19th century. U ...
Ndingaqala olu hlaziyo ngokucela omnye okanye ababini abagqithisileyo kwi-19th century. Uyazi ukuba iza kuhamba njani: UWalden , uHenry David Thoreau wabhala wathi, 'Ndaya ehlathini kuba ndinqwenela--' Andifuni nokugqiba isigwebo, andibi kunjalo? Ukucaphula kuRalph Waldo Emerson's Indalo unokuba nobuchule ngakumbi, kodwa kancinci. Intetho yakhe, I-Transcendentalist , iyinto ecace gca, ukuba ayibonisi kangako, kodwa iikowuti azicacanga kwaphela.
abantu abaphantsi kwezitepsi rap
Ukumema aba babhali kuya kuba lula kakhulu, kucace gca, kwaye ngokuqinisekileyo kuya kuba kakhulu kwizifundo, singasathethi ke ngokungachanekanga noko: 'I-Transcendentalism' yayiyintshukumo yokomoya; USteve Earle une-'blues transcendental, 'eyahluke mpela. Ke ngoko, andizukuqala uphononongo lwam ngale ndlela.
Ngoku, ndinokukhupha IWebster kwaye ndikucacisele 'ngokudlulela' kuwe, kodwa oko ngekwanele kuba inkcazo, ngohlobo lwayo, ithintela inkcazo eqinisekileyo. U-Earle, ngokufanayo, uyasokola ngombono wokugqwesa kwiinowuthsi zakhe. Uhlekisa ngokuchasene nenkcazo enye- 'isenzo sokuhamba ngento'-ngokubhala, 'Ouch.' Ndibona iifestile zeglasi yeglasi kunye noqhawulo mtshato. ' Okokugqibela, ufika kwisigqibo sokuba 'i-transcendence imalunga nokuba nexesha elaneleyo ngokwaneleyo ukuba lazi ixesha lokudlulela phambili.'
Kodwa andifuni ukuqala ngamanqaku e-liner, nokuba.
Ke mhlawumbi kuya kufuneka ndibalise ibali lomntu elinokuthandabuza, njengoko kunjalo kum. Kukho ixesha endandivuka ngalo ezinzulwini zobusuku kwii-11,000 iinyawo kwi-Mt Rainier. Inyanga egcweleyo, eluhlaza okwesibhakabhaka yagqwesa umaleko ophezulu welifu elingenasiphelo kumakhulu ambalwa eenyawo ezantsi kwethu- umbono endingazange ndawubona ngaphandle kwenqwelomoya. Okanye mhlawumbi ndingabalisa ibali malunga xa ndabona i-hallucinated phezulu kwinduli yamangcwaba. Ndihambe ngesangqa esixineneyo phantse iyure kuba, njengoko bendichazile kamva, 'bendidinga ukuziqinisekisa ngobukho bam emhlabeni.'
Kodwa leyo yindlela yam yokubhala, ngenxa yoko andizonwabisi. Endishiya nomzekelo wokugqibela wokugqitha: ialbhamu uqobo. Ingoma yesihloko ivula irekhodi elinemanyano eliphazanyiswa ngokukhawuleza ngu-- ewe- ukubetha. Kodwa emva kokubethwa okuthambileyo okukhumbuza uYo La Tengo wamva nje, le ngoma iqhubela phambili kwimizekelo eyingxondorha elindelwe ngu-Earle, igcwele imigca enje, 'Uyolo emva koko' de kube ngumhla wokufa / Unonophele into oyifunayo andazi de uzame.
Mhlawumbi ngenxa yokuba akafuni kumangalisa umphulaphuli, u-Earle ulinda kancinci ngaphambi kokubonisa isandi esandisiweyo. Ezi ngoma zimbini zilandelayo ziyaqhubeka ngendlela efanayo-yengxondorha, nangona nganye kugqitywe ukuba yahlukile. Emva koko, ngesibetho esinye sokubonakala ngokulula, u-Earle uhambisa u-'Ndinokulinda, 'uhambo lokuya kwindawo ebonakalisiweyo, ebuyileyo yelizwe iJayhawks yenze ikhondo lomsebenzi.
U-Earle ekugqibeleni uqhekeza kunye neCash-ian ballad 'Inkwenkwe engazange ikhale.' Njengoko ilizwi lika-Earle elingahambelaniyo limisela ibali lenkwenkwe, i-harmonium iphakama kwakhona, kungekudala ijoyinwe ngumtya we-12 ongabonakaliyo. Kodwa njengoko ingoma isakha, u-Earle uyifaka kancinci kancinci ibekwe ngokugqibeleleyo, iihhuku zomculo zeokhestra ezivuselelayo. Emva koko, konke kuhluthwe phantsi njengoko ehambisa i-clincher ngendlela exineneyo, i-Dylan-esque fashion: inkwenkwe yayihlala yodwa de kwasekufeni, ngelo xesha, 'Walila inyembezi enye kwinkwenkwe engazange ikhale.'
bethetha ngeelwimi iintloko zithetha
Emva kweejigs ezimbalwa zaseIreland (zeentlobo), isantya siyacotha kwakhona 'kwiLonelier Kunale,' ethi, ngamandla ayo afihlakeleyo, ihambelane ne-Springsteen yokuqala. Ngokunjalo 'ngeHalo' ejikeleze iNyanga, 'ingoma engena emva kweeshelufu ezingaphezulu. 'Kude kube ngumhla wokufa kwam' lelinye ilinge elinobukroti lokudala iklasikhi ebluegrass efanele uMnu.Monroe (enye yeenjongo zika-Earle). Emva 'Kobomi Bam Bonke,' itisalic ehlaziyayo Iliwa Ingoma, i-albhamu ijikelezwe ngu-'Ngaphaya kweYonder (Ingoma kaJonathan), 'isincoko, i-mandola efafazwe nge-epitaph yeentlobo ngesiphelo esifanelekileyo, esizisolayo:' Shinin 'phantsi kubo bonke abandizondayo / ndiyathemba ukuba u-goin' uzisa 'uxolo.'
Umculo ka-Earle awubonisi nje ukugqitha komdali wawo; iboleka ukugqwesa nakumphulaphuli, nawo wonke umculo obalaseleyo uya kwenza. Kodwa eyona nto yenza le yeyona rekhodi zibalaseleyo zika-Earle kukuba uyala ukuthathelwa phantsi zizigqibo zomculo. Ingathi khange ajongane nengxaki yokuba angayongezi okanye angayongezi le nto okanye isixhobo, okanye azimelele kule okanye kwelo cala. Wayenombono nje kwaye wahamba nawo. Olu luphawu olunye lokucinga okungaphaya kokuqonda: akukho nto injengokungazithembi kuba umbono ubeka isenzo.
ividiyo ephezulu yomculo ka-2015
ikamva kunye nesigebenga esincinci
iingoma zofudo ezintsha ze-ninja
ukuqala njani ukukhwabanisa